कसले मच्चायो सुई आतंक ? – News Portal of Global Nepali
कसले मच्चायो सुई आतंक ?
काठमाडौँ — अज्ञात व्यक्तिले सुईजस्तै तिखो चीजले आफूलाई घोचेको भन्दै पछिल्लो एक सातामा पाँच महिलाले उजुरी दिएका छन् । प्रहरीका अनुसार सबैजसो घटना कालीमाटी–ढल्कु क्षेत्रमा राति ९ देखि १० बजेको अवधिमा भएको देखिन्छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले अहिलेसम्म केले घोचिएको हो भन्ने निष्कर्ष ननिस्किएको बताए । प्रहरी परिसर काठमाडौंका डीएसपी होबिन्द्र बोगटीले सुईले नै घोचेको भन्ने चिकित्सकीय पुष्टि भइनसकेको बताए । ‘तिखो वस्तुले घोचेको देखिए पनि सुई भन्ने पुष्टि भइसकेको छैन,’ उनले भने । प्रहरीका अनुसार मोटरसाइकलमा आएर सुईले घोच्नेबित्तिकै भाग्न त्यति सजिलो देखिँदैन । घोचिहाले पनि बाहिर लामो धर्कोजस्तो दाग हुन्छ । ‘तिखो वस्तुले घोचेको भए पनि सुई नै हो भन्न सकिने स्पष्ट आधार देखिँदैन,’ बोगटीले भने । कान्तिपुरमा खबर छ ।